Duulimaadyada Lufthansa Group ayaa ku daray 440 duullimaadyo cusub oo US, Spain, Portugal iyo Scandinavian ah oo loogu talagalay Christmas iyo Maalinta Sannadka Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Lufthansa Group waxay ku daraan 440 duullimaadyo cusub oo US, Spain, Portugal iyo Scandinavian ah oo loogu talagalay Maalinta Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dadka • Wararka Burburinta Portugal • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Spain • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Duulimaadyada Lufthansa Group waxay ku daraan 440 duullimaadyo cusub oo US, Spain, Portugal iyo Scandinavian ah oo loogu talagalay Maalinta Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub
Duulimaadyada Lufthansa Group waxay ku daraan 440 duullimaadyo cusub oo US, Spain, Portugal iyo Scandinavian ah oo loogu talagalay Ciidda Kirismaska ​​​​iyo Maalinta Sannadka Cusub.
Yurub dhexdeeda, meelaha loo aado dhul weynaha Isbaanishka iyo jasiiradaha Canary, Portugal iyo meelaha kale ee qoraxda leh ee gobolka Mediterranean-ka iyo sidoo kale Iskandaneefiyanka ayaa si gaar ah loogu baahan yahay.
Laga soo bilaabo xarumaha ay ku leedahay Munich iyo Frankfurt oo keliya, Lufthansa waxay bixinaysaa in ka badan 120 duullimaad oo dheeri ah oo leh 25,000 oo kursi inta lagu jiro xilliga kirismaska.
Gudaha Maraykanka, New York iyo meelaha loo tago ee gobolka Florida si gaar ah ayaa loo ballansan yahay.
Marka la qorsheynayo socotada hawada waa in ay tixgaliyaan xaalad kasta oo ku habboon gelitaanka hadda iyo xeerarka karantiil.
Shirkadaha diyaaradaha ee Kooxda Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines iyo Eurowings) waxay bixinayaan ku dhawaad ​​80,000 kursi oo dheeri ah 440 duulimaad oo dheeri ah xilliga fasaxa ee soo socda iyo sanadka cusub. Shirkadaha diyaaraduhu waxay hadda ka jawaabayaan kororka toddobaadyada dheer ee baahida duullimaadyada inta lagu jiro fasaxa Fasaxa iyagoo dib u bilaabaya meelaha ay tagayaan iyo kordhinta inta jeer ee isku xirka jira ama geynaya diyaarado waaweyn.
Laga soo bilaabo xarumaha ay Munich iyo Frankfurt Kaliya, Lufthansa waxay bixinaysaa in ka badan 120 duullimaad oo dheeri ah oo awood u leh 25,000 oo kursi inta lagu jiro xilliga kirismaska ​​​​.
Gudaha Maraykanka, New York iyo meelaha loo tago ee gobolka Florida si gaar ah ayaa loo ballansan yahay. Yurub dhexdeeda, meelaha loo aado dhul weynaha Isbaanishka iyo jasiiradaha Canary, Portugal iyo meelaha kale ee qoraxda leh ee gobolka Mediterranean-ka iyo sidoo kale Iskandaneefiyanka ayaa si gaar ah loogu baahan yahay. Marka laga soo tago meelahan, meelaha lagu nasto ee barafka lagu ciyaaro ee Lapland (waqooyiga Finland) ayaa ku soo laabtay jadwalka duulimaadka. Sidaa darteed midku wuxuu gaarayaa xilliga fasaxa iyo sanadka cusub laga bilaabo Frankfurt Ivalo iyo Kuusamo iyo sidoo kale Munich Kittilä ee Lappland iyo Tromsö ee Norway - Northern Light inclusive.
Dhammaan duulimaadyada isla markiiba waa la ballansan karaa. Marka la qorsheynayo socotada hawada waa in ay tixgaliyaan xaalad kasta oo ku habboon gelitaanka hadda iyo xeerarka karantiil.
Socodayaashu waxay gacan ka geysan karaan ilaalinta cimilada waxayna ka dhigi karaan socdaalkooda hawada CO2 dhexdhexaad ah. Marka lagu daro ikhtiyaarka ah in lagu dejiyo duulimaadka iyada oo loo marayo mashaariicda cimilada tayada sare leh, martida Lufthansa waxay durba ku duuli karaan shidaal waara maanta. Shirkadaha diyaaradaha ee Kooxda Lufthansa waxay ku dhex milmeen doorashooyinka habka boosaska. Warqadaha soo noqnoqda waxay ka heli karaan Miles & in ka badan abka.